ကျွန်မရဲ့ ရင်သားတွေက ပျော်ရွှင်မှုပေးနေတာကို ဘာလို့ရန်မူနေကြတာလဲလို့” ရွှေအိမ်စည် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြီ(ရုပ်သံ) – Zartiman
ကျွန်မရဲ့ ရင်သားတွေက ပျော်ရွှင်မှုပေးနေတာကို ဘာလို့ရန်မူနေကြတာလဲလို့” ရွှေအိမ်စည် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြီ(ရုပ်သံ)
ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ အရာတွေကို ပြမစားရရင် ဘာကို ပြစားရမလဲ? ကျမ ရဲ့ ရင်သားတွေက ဘယ်သူ့ ကို ဘာလုပ်ထားလို့လဲ မသိဘူး.. ဒါကို အ ရမ်းတွေ Feel ဖြစ်ပြီးတော့ လိုက်ရန်တွေ မူနေကြတယ်။ တကယ်တော့ ဒါကြီးက ပျော်ရွှင်မှုတွေပဲ ပေးနေတာပါ” လို့ ပြောလာတဲ့ အလှ မယ် ၊ မော်ဒယ် ၊ သရုပ်ဆောင် ရွှေအိမ်စည် နှင့် ခဏတာ တွေ့ဆုံခိုက်အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေအိမ်စည် ကတော့ Miss အလှမယ်၊ မော်ဒယ် တစ်ယောက်ပါ။ ဆံပင်ရှည်ရှည်လေး နဲ့ ကျော့ရှင်းပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့် ရှိတဲ့ သူမရဲ့ ဟန်ပန်အမူအရာတွေက ပရိသတ်တွေကြားမှာ အတော်လေးကို ရေပန်းစားပါတယ်။ ရွှေအိမ်စည်ကတော့ စကားပြောရင် လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတတ်ပါတယ်။
သူမကို အမျိုးသား ပရိသတ်ထက် အမျိုးသမီး ပရိသတ်တွေက ပိုမိုသဘောကျအားပေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။”ကိုယ့် ရဲ့ LOOK ကို ပြပြီး စားချင်တဲ့ အတွက် ဒီ Modeling Industry / မော်ဒယ်လောက ထဲကို ဝင်လာတာလေလို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ကိုယျ့မှာ ရှိတဲ့ အရာတှကေို ပွမစားရရငျ ဘာကို ပွစားရမလဲ? ကမြ ရဲ့ ရငျသားတှကေ ဘယျသူ့ ကို ဘာလုပျထားလို့လဲ မသိဘူး.. ဒါကို အ ရမျးတှေ Feel ဖွဈပွီးတော့ လိုကျရနျတှေ မူနကွေတယျ။ တကယျတော့ ဒါကွီးက ပြျောရှငျမှုတှပေဲ ပေးနတောပါ” လို့ ပွောလာတဲ့ အလှ မယျ ၊ မျောဒယျ ၊ သရုပျဆောငျ ရှအေိမျစညျ နှငျ့ ခဏတာ တှဆေုံ့ခိုကျအကွောငျး ဖွဈပါတယျ။
ရှအေိမျစညျ ကတော့ Miss အလှမယျ၊ မျောဒယျ တဈယောကျပါ။ ဆံပငျရှညျရှညျလေး နဲ့ ကြော့ရှငျးပွီး ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှု အပွညျ့ ရှိတဲ့ သူမရဲ့ ဟနျပနျအမူအရာတှကေ ပရိသတျတှကွေားမှာ အတျောလေးကို ရပေနျးစားပါတယျ။ ရှအေိမျစညျကတော့ စကားပွောရငျ လညျး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောတတျပါတယျ။
သူမကို အမြိုးသား ပရိသတျထကျ အမြိုးသမီး ပရိသတျတှကေ ပိုမိုသဘောကအြားပေးတာကို တှရေ့ပါတယျ။”ကိုယျ့ ရဲ့ LOOK ကို ပွပွီး စားခငျြတဲ့ အတှကျ ဒီ Modeling Industry / မျောဒယျလောက ထဲကို ဝငျလာတာလလေို့ ပွောဆိုလိုကျပါတယျ။
ညအိပ်ဝတ်စုံလေးနဲ့ ညို့အားပြင်းနေတဲ့ ပိုပိုရဲ့VIDEO
ကြည့်မိသူတိုင်း ရင်ခုန်သံအဆုံးထိရောက်သွားစေမယ့် မတ်မတ်သင်ဇာရဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်